Abavelisi beengxowa zezithambiso kunye nababoneleli - iChina izithambiso zeengxowa zefektri
Ipholiyesta zepikiniki zigqunyiwe epholileyo ibhegi umthengisi facto ...
Ipholiyesta kabini isebe sasemini ibhegi kumthengisi mveliso ...
Ihowuliseyili ipholiyesta China zigqunyiwe ibhegi sasemini ibhegi
China siko ipholiyesta zigqunyiwe ubhaka ro ...
Itheyiphu yoThotho lweeKhwama zoThintelo loThotho lwesiKhwama
Le nto yokuhombisa ingxowa yenziwe ngophawu oluphezulu lwesikhumba, ithambile kwaye intofontofo, iyamelana nokungcola kunye neabrasion, kulula ukuyicoca. Ubunzima bokukhanya, bomelele kakhulu kwaye kulula ukubuthwala. Le ibhegi iluncedo kakhulu kwaye icwecwe, umthamo omkhulu. Iphethe okuninzi, kwaye inokuxhoma kuzo zonke iindawo. Ingxowa eneziphu yangaphakathi, inokulungiselela imaski yobuso, iipensile zamashiya kunye nezinye izinto. Uyilo ngentando nayo yamkelekile. Sinegumbi elinamandla kakhulu lesampulu. Ndithumele umsebenzi wakho wobugcisa, iisampulu ziya kubuyela ku ...
Ibhegi eNcinci yokuPaka yokuThambisa enesiphatho esincinci
Izinto zokwenza ibhegi zokwenza ubuso zenziwe ngelaphu le-oxford ekumgangatho ophezulu, ithambile kwaye intofontofo, iyamelana nokungcola kunye neabrasion, kulula ukuyicoca. Ubunzima bokukhanya, bomelele kakhulu kwaye kulula ukubuthwala. iya kuba kukuhamba okuthembekileyo kunye neqabane lakho ekhaya ixesha elide. Ukuhamba kobungakanani beebhegi zangasese ezinkulu: 9.4 ″ x 5.1 ″ x 6.3 ″, inendawo eyaneleyo yohambo lweentsuku ezinde okanye iindawo zangasese zosapho njengeshampu, ijeli yeshawari, intlama yamazinyo, iibrashi zamazinyo, izithambiso, izinto zokucheba, iitawuli, njl, njl. .
Isingxobo esincinci esenziwe ngobuso besikhwama seMoto esiThambileyo
Ingxowa yezithambiso yenziwe ngesikhumba esikumgangatho ophezulu se-PU. Ayinamanzi, ayikrweki, ayomelele kwaye inendawo evaliweyo evaliweyo yokuqinisekisa ukhuseleko lwento yakho ngaphakathi. Le ibhegi iluncedo kakhulu kwaye icwecwe, umthamo omkhulu. Ibambe inala, kwaye inokuxhoma kuzo zonke iintlobo zeendawo. Ilungele ukusetyenziswa kwemihla ngemihla okanye ukuhamba. Iya kuba sisipho esihle sabasetyhini kunye namantombazana. Uyilo ngentando nayo yamkelekile. Sinegumbi elinamandla kakhulu lesampulu. Ndithumele umsebenzi wakho wobugcisa, iisampulu ziya kubuyela kuwe. Inombolo Inombolo: ML17811 S ...
I-2019 yeZinto eziNtsha eziLukiweyo zeNkozo yoLusu lweMveliso yeKhosi
Izinto zokwenza ibhegi zokwenza ubuso zenziwe ngelaphu lesikhumba esomgangatho ophezulu, zithambile kwaye zikhululekile, ziyamelana nokungcola kunye neabrasion, kulula ukuyicoca. Ubunzima bokukhanya, bomelele kakhulu kwaye kulula ukubuthwala. Le ibhegi iluncedo kakhulu kwaye icwecwe, umthamo omkhulu. Ibambe inala, kwaye inokuxhoma kuzo zonke iintlobo zeendawo. Ilungele ukusetyenziswa kwemihla ngemihla okanye ukuhamba. Iya kuba sisipho esihle sabasetyhini kunye namantombazana. Uyilo ngentando nayo yamkelekile. Sinegumbi elinamandla kakhulu lesampulu. Ndithumele umsebenzi wakho wobugcisa, iisampulu ziya kuba ...
Umgangatho oPhezulu oBala oPhezulu weOxford woKhenketho woKwenza iNgxowa yeZithambiso
Izinto zokwenza ibhegi zokwenza ubuso zenziwe ngelaphu le-oxford ekumgangatho ophezulu, ithambile kwaye intofontofo, iyamelana nokungcola kunye neabrasion, kulula ukuyicoca. Ubunzima bokukhanya, bomelele kakhulu kwaye kulula ukubuthwala. Le ibhegi iluncedo kakhulu kwaye icwecwe, umthamo omkhulu. Iphethe okuninzi, kwaye inokuxhoma kuzo zonke iindawo. Ingxowa eneziphu yangaphakathi, inokulungiselela imaski yobuso, iipensile zamashiya kunye nezinye izinto. Uyilo ngentando nayo yamkelekile. Sinegumbi elinamandla kakhulu lesampulu. Ndithumele umsebenzi wakho wobugcisa, iisampulu ziya kubuyela ku-y ...
Umgangatho ophezulu weCotton Canvas Zipper Travel Pouch Makeup cosmetic Bag
Le bhegi yenziwe ngelaphu, ithambile kwaye intofontofo, iyamelana nobumdaka kunye nearrasion, kulula ukuyicoca. Ubunzima bokukhanya, bomelele kakhulu kwaye kulula ukubuthwala. ezi ngxowa zilinganisa i-approx. I-8.2 x 5.3 x i-4.3 intshi, amandla amakhulu ukulungiselela iimfuno zakho zemihla ngemihla kwaye ikulethele lula, ungayithatha xa useluhambeni, uyokuthenga, ukhempisha nokunye, kulula ukuphatha nokusebenzisa. Ungabeka ifowuni yakho, amakhadi etyala, iingqekembe, Imali kunye nezinye izinto ezincinci ebhegini yakho ukukunceda uququzelele izinto zakho kwaye ugcine ...